Iphrofayela Yenkampani - Qingdao Junray Intelligent Instrument Co., Ltd.
Qingdao Junray Intelligent Instrument Co., Ltd.yasungulwa ngo-Agasti 2007. Kuyibhizinisi likazwelonke lobuchwepheshe obusha eligxile ku-R & D yezinsimbi zokuthola. Sinikezela ngezinsiza nezinsiza zokutholwa eziphephile nezithembekile ekuqapheni imvelo, ukuphepha kokudla, ukukala kanye nokulinganisa.
Qingdao Junray Intelligent wensimbi Co., LtdInenqubo ephelele ye-R & D nekhono, manje ineminyango eyi-8 kufaka phakathi ubuchwepheshe, ilabhorethri, imishini, ukwakhiwa kwemboni, inqubo yokukhiqiza inqubo, enabasebenzi abangaphezu kwama-90. Inkampani yethu ineqembu eliphelele lokulethwa kokukhiqizwa kanye neqembu lokuphathwa kwekhwalithi, inani labasebenzi abangaphezu kuka-110, abangaqinisekisa ngempumelelo ukulethwa kwekhwalithi ephezulu futhi okufika ngesikhathi sensimbi ngayinye kumakhasimende.
I- ibhizinisi eliyinhlokokufaka phakathi imaski, abahloli bengubo yokuhlinza, izinsimbi zokuhlola amagumbi ahlanzekile, okokuhlola okokuhlunga kwe-HEPA kwikhabhinethi ye-biosafety, ama-microbe sampling kanye nezinsimbi zokuhlaziya, izinsimbi ezikhiqiza i-aerosol nezokuhlola. Ngaphandle kwalokho, sihlinzeka ngezifiso zesampula ze-aerosol kanye nezixazululo ze-bio-sampling.
Kusukela kwagqashuka ubhubhane lwe-COVID-19 ekuqaleni kuka-2020, omaskhi abazithuthukisayo kanye nezinsimbi zokuhlola imishini yokuvikela kanye nezinsimbi zokuthwebula amagciwane kusetshenziselwe ukuhlinzeka ngokuvikelwa okuqinile kwezokwelapha kubasebenzi bezokwelapha kanye nomphakathi izibhedlela zasekhaya nezangaphandle, amayunithi wokuhlola amadivayisi wezokwelapha, izikhungo zokuhlola ukudla nezidakamizwa namanye amayunithi. Phakathi kwazo,I-ZR-1006 ukusebenza kahle kokuhlunga izinhlayiya futhi umtshina wokumelana nokuhamba komoya, umhloli wokuhlola ukusebenza kahle kwe-ZR-1000 bacterial filtration (BFE) zithunyelwa eJalimane, eBrithani, eSingapore, e-Indonesia nakwamanye amazwe.